साइकोमिटरः तपाईले यस उपकरणको बारेमा सबै कुरा जान्नु पर्छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | | मौसम विज्ञानिय उपकरणहरू
आज हामी मौसम विज्ञानमा मापन उपकरणहरूको अर्को अपरेशनको वर्णन गर्न आएका छौं। हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं psychrometer। यो वायुको स्तम्भमा पानी वाष्पको सामग्री नाप्न प्रयोग गरिने उपकरण हो। वायुमण्डलमा पानीको बाफलाई चिन्नु आर्द्रताको डिग्री निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
यदि तपाइँ साइकोरोमीटर कसरी ह्यान्डल गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ, यसका सबै सुविधाहरू र हेरचाहको खाँचो, यो तपाईंको पोष्ट हो।
1 मनोवैज्ञानिक के हो
2 कसरी साइकोरोमीटर प्रयोग गर्ने
3 तापमान र आर्द्रता
4 पढाइ राम्रोसँग गर्नका लागि ध्यान दिनुहोस्
5 आवश्यक रखरखाव
मनोवैज्ञानिक के हो
हामीले परिचयमा भनेझैं यो हावामा पानी वाष्प नाप्नका लागि उपकरण हो। यो गर्नका लागि यसले एक जोडी समावेश गर्दछ पारा स्तम्भको साथ गिलास थर्मामीटरहरू (पुरानो थर्मामीटर जस्तै)। तिनीहरू एक प्लेट मा राखिएको छ। ती मध्ये एउटालाई सुक्खा बल्ब र अर्कोलाई भिलो बल्ब भनिन्छ। यो पारा बल्बमा कपास वा मलमल भनिने कपास कपडाको आवरणमा राखिएको हो, जुन आवश्यक संकेतहरू प्राप्त गर्न भिजेको हुनु पर्छ।
भिजेको बल्ब सफा मलमलमा ढाकिएको हुन्छ र अवलोकनभन्दा पहिले पानीले भरिपूर्ण हुन्छ। जब बल्ब भाँडो गरिन्छ, यसले ओसिलो बल्बको तापक्रम र अन्य सुक्खा बल्बको संकेत गर्दछ।
कसरी साइकोरोमीटर प्रयोग गर्ने
दुबै बल्बले नापीएको तापक्रम प्राप्त गर्न निम्न चरणहरू गर्नु आवश्यक छ।
हामीले दसौं डिग्री पुग्न ड्राई बल्ब थर्मामिटर पढ्नुपर्दछ। यो तापक्रमले वातावरणको तापक्रमलाई चिन्ह लगाउँछ।
हामी भिजेको बल्ब थर्मामीटरको मलमल यति लामो वा सफा पानीले जति पटक आवश्यक हुन्छ धेरै पटक डुबाउँदछौं जबसम्म यसको मुनि ड्रप हुँदैन।
मलमललाई भिजाउन हामीसँग साइकोरोमिटर हुनुहुँदैन जुन मौसम कोट भित्रै स्थिर हुन्छ। यसलाई साइक्रोमाटरमा पानी सहितको कन्टेनरमा लैजानु पर्छ ताकि मलमलको बल्ब तरलमा डुबेको छ।
सामान्यतया, पानी मौसम आश्रय भित्र एक गिलास कन्टेनर मा राख्नु पर्छ। हामी यसलाई अझ राम्रोसँग जान्न कोटलाई पछि वर्णन गर्ने छौं। कन्टेनरलाई कभर राख्न प्रयास गर्नु आवश्यक छ ताकि पानी स्वच्छ रहन्छ र मौसमविज्ञानी आश्रय भित्रको आर्द्रता परिवर्तन हुँदैन।
त्यहाँ समय हुन्छ जब आर्द्रता निकै उच्च हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मलमल नम हुन सक्छ, तर यसलाई फेरि भिजाउनु आवश्यक पर्दछ। यदि परिवेश तापमान अधिक छ वा सापेक्ष आर्द्रता धेरै कम छ, तपाईंले सुक्खा बनाउनको निम्ति तपाईंले मलमललाई लामो लामो गर्न आवश्यक पर्दछ। पर्यवेक्षकले अनुमान गर्न सक्छन् कि बल्ब तापक्रम ० डिग्री वा कम वातावरणीय चिसोसँग हुनेछ।
तापमान र आर्द्रता
यदि मलमल थर्मामिटरको ठीक अघि सुख्खा हुन्छ भने सही गीला बल्ब तापमानलाई संकेत गर्दछ, हामी गलत मापन गर्दैछौं।
संसारभरि असंख्य मौसम र तापक्रमहरू छन्। तसर्थ, त्यहाँ त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ तापमान उच्च र आर्द्रता कम छ। यी हुन् मरुभूमि वा अर्ध मरुभूमि क्षेत्रहरू। यी अवसरहरूमा हामीले मलमललाई भिजाउन ताजा पानीको उपयोग गर्नुपर्दछ र यसको अकाल सुक्नुबाट जोगिनु पर्छ।
पानी चिसो राख्न, यसलाई फोरेर भाँडोमा राख्न सकिन्छ, तर भित्रपट्टि नुनलाई नहेल्न कोटको बाहिर कन्टेनर छोड्ने प्रयास गर्दै।
मनोबोधकलाई काममा लिनको लागि अर्को चरण भनेको फ्यानलाई निरन्तर हावाको प्रवाह प्रदान गर्न चलाउनु हो। यो हावा सही मापनका लागि थर्मामिटरको बल्बबाट पार हुनुपर्छ। यदि रातमा मापन गरिन्छ भने, स्पटलाइट प्रयोग गर्नु पर्छ। यदि हामीले प्रयोग गर्ने साइकोरोमीटर एक गोफन हो भने, हामीले यसलाई प्रति सेकेन्ड चार क्रान्तिहरूको गतिमा मोड्नु पर्छ। यो स्पिन गति छिटो पठन लिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो तब हो जब तपाईं हल्का रूपमा उठ्नुपर्दछ र छायाँमा पढ्नु पर्छ।
हामीले तीन मिनेटको लागि पनि पर्याप्त हावामा हाल्नु पर्छ। थर्मामिटरमा पारा यसको खण्डन रोक्न र यसको न्यूनतम स्तम्भ लम्बाई पुग्न पर्छ। पठन मान दशममा मानको करीब लिनु पर्छ। हामीले प्राप्त गर्ने मान गीला बल्बको तापक्रमको हुनेछ।
हामी प्रशंसक बन्द गर्छौं र यदि हामी राती अवलोकन गर्छौं भने, हामी फोकस बन्द गर्नेछौं।
यदि हावा तापमान3डिग्री भन्दा कम वा बराबर छ भने, उच्च तापक्रममा मलमललाई पानीले गीलो पार्न आवश्यक छ। यसले थर्मामीटर बल्ब वा मलमलमा नै कुनै पनि बरफ निर्माणलाई पूर्ण रूपमा पिघल्नेछ।
पढाइ राम्रोसँग गर्नका लागि ध्यान दिनुहोस्
यदि हामी सकेसम्म विश्वसनीय डाटा लिन चाहान्छौं भने हामीले केहि पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
जब हामी थर्मामिटरहरू पढ्छौं, हामी 30० सेमी वा सोभन्दा बढीको सुविधाजनक दूरीमा उभिनैपर्दछ कि हाम्रो शरीरको तापले थर्मामीटरको तापक्रमलाई असर गर्छ। यस तरीकाले हामी सहि पठन प्राप्त गर्नेछौं
उही समयमा, यो निश्चित गर्नुहोस् कि दृश्य रेखा तरलताको मेनिस्कसमा टेर्मेन्ट छ र थर्मामीटरमा लंबवत छ। यो तरिकाले हामी लंबन त्रुटिहरू बेवास्ता गर्नेछौं।
यदि राति थर्मोमिटर पढाइ गरिएको छ भने, हामीले सकेसम्म छोटो समयमा विद्युत बत्ती राख्नु पर्छ र यसलाई उपकरणको नजिक ल्याउनु हुँदैन। अन्यथा यसले तापक्रम लिनेलाई असर गर्छ।
यदि स्लि psych्ग साइक्रोमिटर प्रयोग गरिएको छ भने बाहिर र बाहिर सेन्डरी अवलोकन साइटको नजिक छायामा कम गर्नु यो हुन्छ।
मौसमविज्ञानी आश्रय भनेको त्यस्तो उपकरण हो जसको प्रस्तुतीकरण दर्शकको आफ्नो स्टेशनको हेरचाहको उत्तम सूचक हो। दुबैलाई उनीहरूको रक्षा गर्न केही हेरचाहको आवश्यकता छ। यी ख्यालहरू हुन्:
दिनमा कम्तिमा एक पटक कोट सफा गर्नुहोस् मैला र धुलो हटाउनुहोस् जुन बस्ती हुन सक्छ।
र paint राम्रो अवस्थामा हुनुपर्दछ। यो प्रत्येक छ महिनामा रंग्नको लागि पर्याप्त छ। यदि स्टेशन तट नजिकै छ भने प्रत्येक तीन महिनामा यसलाई रंगाउन राम्रो हुन्छ।
दिनको अन्तिम अवलोकन समाप्त गरेपछि, मलमललाई भिजाउन प्रयोग गरिएको पानी परिवर्तन गर्नुहोस् भिजेको बल्ब थर्मामीटर। हामी यो राखिएको कन्टेनर पनि धुनेछौं।
हप्तामा एक पटक मलमल परिवर्तन गर्नुहोस्।
यस जानकारीको साथ तपाई साइकोरोमिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञानिय उपकरणहरू » साइक्रोमिटर
धेरै राम्रो लेख, बाकी छ कि मैले पाएको संग तुलना, यो एक धेरै राम्रो संगठित छ। मसँग एउटा जागिर को बारे मा एउटा प्रश्न छ कि मैले गर्नु पर्छ। मँ एक बायलर जसको अधिकतम तापमान 100-120ºC को दायरा मा छ को गीला बल्ब तापमान मापन गर्न आवश्यक छ। यस को लागी, म एक साइक्रोमीटर को लागी देखी रहेको छु कि बिभिन्न प्रदायकहरु को बीच तापमान को त्यो दायरा को अनुकूलन गर्दछ, तर मँ यो पाउन सक्दिन। के तपाइँ कुनै जान्नुहुन्छ? अर्कोतर्फ, उपकरण आफैं निर्माण गर्न को लागी, म बिभिन्न कपडाहरु कि उच्च तापमान मा आर्द्र अवस्था को सामना गर्न सक्छु को लागी देखी रहेको छ, यो कपडा भिजेको पानी ठुलो थियो भने पर्याप्त हुनेछ?
यहाहरु सबैलाई धन्यवाद।